लगभग हरेक महिलाले आफ्नो जीवनको अधिकांश खानेकुरा तयार पार्छ। यसैले उनको लागि भान्सा कोठा हो कि त्यो प्राय: प्रायजसो कोठा हो। अनि निस्सन्देह, सबैले यसलाई आधुनिक आवश्यकता अनुसार अनुसार लैजान चाहन्छ। यसका लागि कुन उपकरण आवश्यक छ? यस मा एक नजिकको हेरौं।
खाना पकाउँदा सबैभन्दा उपभोग र श्रमिक के हो? निस्सन्देह, उत्पादनहरू फिसाउँदै। पुरानो फैशनमा, धेरै महिलाहरूले यसका लागि चाकू प्रयोग गर्छन्। यद्यपि, प्रगति अझै खडा गर्दैन। बिरुवाहरू अब गृहिणीहरूलाई मदत गर्दैछन्। स्टोरमा, यो प्रकारका उपकरणहरू छनौट गर्न गाह्रो छ किनकि वर्गीकरण धेरै ठूलो छ। यो Braun कम्पनी को ध्यान को लागि सिफारिश को सिफारिश छ। यो उत्पादन बजारमा लामो समयसम्म भएको छ र आफैले मात्र सकारात्मक पक्षमा साबित गरेको छ। यी निष्कर्षहरू मानिसहरूको प्रतिक्रियामा आधारित हुन्छन्।
Blenders दुई प्रकारका छन्: स्थिर र पनडुब्बी। पछि सबैभन्दा सजिलो हो, किनकि तिनीहरूले धेरै स्थान लिन सकेनन् र कार्यात्मक छन्। त्यसोभए, आइतबार ब्रायन एमक 535 सॉस मोडेलबाट परिचित हुनुहोस्, यसको समीक्षा अझ बढी सकारात्मक छ। यो के हो? सबैभन्दा पहिला, म नोट गर्न चाहन्छु कि यो मोडेल धेरै वर्षको लागि बिक्री नेता भएको छ।
लगभग सबै यो यन्त्रको र यसको स्टाइलिश डिजाइनको गुणलाई ध्यान दिनुहोस्। एक लामो सेवा जीवन पनि एक महत्त्वपूर्ण लाभ हो। 24 महिनाको वारंटी संग, निर्माताले दावी3बर्ष भन्दा बढीका लागि ब्रेकरेसन बिना काम गर्न सक्दछ।
गुणस्तर को स्तर पनि पुष्टि भएको छ जसबाट ब्रायन MQ535 सॉस ब्लेंडर को तत्व बनाइयो। यो मामला उच्च गुणवत्ता वाला प्लास्टिक देखि बनाइन्छ, स्टेनलेस स्टील खुट्टा र चाकू को लागि प्रयोग गरिन्छ। साथै लायक पूर्ण सेट हो, जसमा मापन कप र अतिरिक्त नलिकाहरू समावेश छन्।
यो मोडेल धेरै व्यंजनहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणको लागि, ब्ल्लेन्डर प्रयोग गरी तपाइँ बर्फ कुच्याउन सक्नुहुनेछ, एक smoothie हल्लाउनुहोस्, फल वा सब्जी puree, र यसलाई डेसर्टका लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। 600 डब्लुको शक्ति, जुन सानो मोटर छ, धेरै उत्पादनहरू प्रशोधन गर्न पर्याप्त छ। उत्पादकता प्रति मिनेट 12 हजार भन्दा बढी क्रालोलजहरू हो। ब्लेंडर ब्रुन MQ535 सस एक टर्बो मोड संग सुसज्जित छ, जो एक विशेष समारोह मा बिताएको समय को कम गर्दछ। उपकरण दुई गतिको साथ सुसज्जित छ।
शरीर र उपकरण
त्यसोभए, ब्लेंडर टीएम ब्रौन किन्नुअघि तपाईलाई केही अंकहरू बुझ्न आवश्यक छ। प्रत्येक उपभोक्ताको लागि व्यावहारिक रूपमा, डिजाइन तत्वहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यही कारणले तपाईलाई यो डिजाइनको डिजाइन गर्न आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिला, यो ब्रौन MQ535 सस को हल्का वजन को उल्लेख गर्न लायक छ। दोस्रो ठाउँमा त्यहाँ यस्तो प्यारामिटर छ, स्थायित्वको रूपमा। निर्माताले धेरै रबडयुक्त भागहरू प्रयोग गरे जुन न केवल सुविधाजनक प्रयोगका लागि जिम्मेवार छन्, तर सुरक्षाका लागि पनि। यस सामग्रीको सबै धन्यवादमा ह्यान्डल पर्दैन। र अन्तिम क्षण रङ छ। यो शास्त्रीय रङ (सेतो र खैरो) मा बनाइएको छ, त्यसैले यो भान्साको कुनै पनि ठाउँमा पूर्णतया फिट हुनेछ।
अब हामी ब्लेंडर Braun MQ535 सस को विन्यास को बारे मा कुरा गर्नु पर्छ। यो यन्त्र किन खरिद गर्ने सम्भावना खरिदकर्ताको लागि के सोच्नु हुन्छ? किटमा निर्माताले धेरै महत्त्वपूर्ण संलग्नकहरू प्रदान गर्दछ। तिनीहरू मध्ये एक फरक प्रकार को उत्पादनहरु को लागि एक सार्वभौमिक चौंपर हो। एक माप ग्लास, को क्षमता 600 मिलीलीटर, ककटेल को तैयारी को समयमा प्रयोग गरिन्छ। महत्त्वपूर्ण छ, त्यहाँ एक whisk छ, जसको साथ तपाईं मिक्सर लाई पूर्ण रूपमा बदल्न सक्नुहुन्छ।
अब यो यस उपकरणको सबै सकारात्मक पहलुहरु लाई हाइलाइट गर्न लायक छ। प्रयोगकर्ताहरु को एक ठूलो संख्या को समीक्षा को पढने को पहिले देखि नै ब्रौन MQ535 सॉस ब्लेंडर खरीदा छ, निम्नलिखित फायदाहरु को प्रतिष्ठित हुन सक्छ। खाना पकाउँदा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मापदण्ड शोर स्तर हो। धेरै गृहिणीहरूले ध्यान दिए कि यन्त्र लगभग बर्फको पिन्ट सँग पनि श्रव्य छैन। तथापि, कसैलाई विश्वास गर्दछ कि यसले शक्ति कम गर्छ। यो विचार गलत छ। प्रदर्शन र आवाज स्तर अन्तर्क्रिया नगरिएको छैन।
निस्सन्देह, ब्रौन MQ535 सस को ठूलो फायदा यसको प्रयोग को आसानी हो। यो माथि उल्लेखित रूपमा, रबड गरिएको ह्यान्डलले विभिन्न हेरफेरहरू निकाल्न सजिलो बनाउँदछ, उदाहरणको लागि, अण्डा र कुकुटीलाई हराउन। साथै, प्रयोगकर्ता-अनुकूल इन्फेसले यन्त्रको साथ धेरै सजिलोसँग काम गर्दछ।
अगाडि छेउमा दुई बटनहरू छन्, जुन गति स्विच गर्न जिम्मेवार छन्। अनि निस्सन्देह, यो विश्वसनीयताको बारेमा उल्लेखको लायक छ। धेरै समीक्षाहरूको अनुसार , गम्भीर ब्रेकहरू बिना ब्ल्लेन्डरहरू5वर्ष लामो हुन सकेन।
आदर्श टेक्नोलोजी अवस्थित छैन, त्यसैले, कुनै पनि उपकरण किन्नु, नकारात्मक पक्षहरू अध्ययन गर्न लायक छ। ब्लेंडर ब्रुन MQ535 चटनी (वास्तविक खरीददारहरूको समीक्षाले यो सूची बनाउन मद्दत गर्दछ) एक छोटोको साथमा छोटो छोटो छ। दुर्भाग्यवश, केही कारणले जर्मन निर्माताले यो तथ्यलाई खातामा राखेन। तथापि, प्रयोगकर्ताहरूको अनुसार, यो विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छैन, किनकि यन्त्र सही स्थानमा राख्न सजिलो छ। साथै, धेरै माप माप कप को मात्रा को बारे मा चिंतित छ। यदि तपाईं एक व्यक्तिको लागि खाना खाउनुहुन्छ भने, यो खुट्टा पर्याप्त मात्रामा हुनेछ। तर तीन व्यक्तिको परिवारको लागि, उदाहरणका लागि, ककटेल कम्तिमा तीन पटक पकाउनु पर्छ।
टाइमरसँग सकेट: स्वचालित रूपमा बिजुलीको लागि
विशाल एयर कंडीशनिंगहरूले विशाल कोठाहरूमा एक आरामदायक वातावरण सिर्जना गर्नेछ
मिरर फोटोपैरेजस Nikon D5100 किट: निर्दिष्टीकरण, पेशेवर र amateurs को समीक्षा
केबल सेक्शन को गणना। केबल क्रस-सेक्शन गणना तालिका
ब्याट्री चार्जर: सुविधा र कार्यक्षमता
जादूगर रक लेक Baikal मा: इतिहास र Legends
क्यालोरी चिकन टुकडे करो, धमाकेदार र कुटपिट मा तला
इन्टेल कोर i7 प्रोसेसर 3770: निर्दिष्टीकरण, तुलना, प्रवेग र समीक्षा
ह्यान्डलहरू मा कुँदिएका - एक स्टाइलिश र प्रतिष्ठित छ
कर्पोरेट सम्पत्ति कर। अनुकूलन गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका।
Antihypertensives - प्रकार र आवेदन विधिहरू
"मक्खी" समूह। Discography, संरचना
"दुष्ट - यो ..."। चेतावनी प्रेरितहरूलाई
को सुटकेश सबै "एक हप्तामा वजन। मासु संग परम्परागत मेनु"
मशरूम को साधारण लक्षण के के हुन् र तिनीहरूले बिरुवाहरु र जनावर फरक कसरी?